फरार बिनयजंग बसपार्क पक्रा'उ ! सपना भन्छिन सत्यतत्थ अब बाहिर आउँछ Binya Vs Sapana -
Home News फरार बिनयजंग बसपार्क पक्रा’उ ! सपना भन्छिन सत्यतत्थ अब बाहिर आउँछ Binya...
फरार बिनयजंग बसपार्क पक्रा’उ ! सपना भन्छिन सत्यतत्थ अब बाहिर आउँछ Binya Vs Sapana
काठमाडौं प्रहरीले बीबीसीको प्रभावशाली महिलाहरुको सूचीमा पर्न सफल सपना रोकामगरमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा विनयजंग बस्नेतलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले बस्नेतलाई काठमाडौंको नयाँ बसपार्कबाट पक्राउ गरेको हो ।
बिबिसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगरले विनयजंग बस्नेतविरूद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दिएकी छन् । आफूलाई ‘अभद्र व्य,वहार’ गरेको भन्दै सपनाले उजुरी दिएको परिसर प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो । ‘अ,भद्र व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दिनुभएकाे हाे’, सिंहले न्युज २४ लाई भन्नुभयो ।
सपनाले शुक्रबार नै जाहेरी दिन खोजेपनि सार्वजनिक बिदा भएको कारणले जाहेरी लिएर आइतबार मात्रै दर्ता गरिएको एसएसपी सिंहले जानकारी दिनुभयो । बस्नेतले युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदै सपनाका नग्न तस्वीर आफूसँग पेन ड्राइभमा सुरक्षित रहेको र कुनै बेला सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएका थिए ।
सपना र बस्नेतले मिलेर बेवारिसे शव जलाउने काम गर्दै आएका थिए । सोही क्रममा केही महिनाअघि उनीहरुबीच तिक्तता आएको थियो । म्याग्दीबाट काठमाडौं आएकी सपना बस्नेतसँगै बस्थिइन् ।-न्युज२४नेपालबाट।
Previous articleभागरथि भट्टको ह*त्यारा सार्वजनिक गर्दै रह*स्यमय खुलासा | चलाखीपूर्ण हर्कत | प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्त
Next articleप्रेम दिवशकै दिन कन्चन पुगे कोमामा, दियो निभ्न लाग्यो भन्दै अनिशालाई निरूको यस्तो सन्देश (भिडियो सहित)